Heart Museum: "ကျေနပ်စွာချစ်တတ်သူ"
အခုလို ငါ တောင့်တချိန်လေးမှာ
ငါ ကျေနပ်ပါတယ် ချစ်သူရယ်...။
ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ အပိုင်းအစတခုကိုပြန်လည်ခံစားတာပါဗျာ။ ***
အခြားကဗျာ ကောင်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်ချင်သေးရင်........ Please check; http://einlay.blogspot.com/2008/03/blog-post_12.html
Posted by Heartmuseum at 5:20 PM
I also like it , thanks.
ကောင်းတယ် မောင် အညတြ ရေ :D
~~အဲဒီ့စာသားလေးမိုက်တယ်~~ ကိုယ်တိုင်လည်းရေး အုံးလေ :)